Thu, Jun 4, 2020 at 8:05pm
छवि ओझाविरुद्ध उनकी जेठी श्रीमतीले हालिन् बहुविवाहको मुद्दा
काठमाडाैं, ५ साउन । फिल्म निर्माता छवि ओझाकी जेठी श्रीमतीले ओझाविरुद्ध बहुविवाहको अभियोगमा जाहेरी दिएकी छिन् । ओझाकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले उनमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दर्ता गराएकी हुन् । २०४१ सालमा आफूहरुको विवाह भएको उल्लेख गर्दै दिएको जाहेरीमा हेमाले २०७५ पुस ११ गते छवि र शिल्पा पोखरेलबीच विवाह भएकाले बहुविवाहमा कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छिन्। ‘बहुविवाह गरेको प्रमाणित भएकाले..
समुन्द्री तटमा ब्यायफ्रेन्डसँग ‘चुम्बन’को तस्विरले विवादमा साम्राज्ञी
काठमाडाैं, ५ साउन । पछिल्लाे समय साम्राज्ञी निकै विवादमा तानिएकी छिन् । आजभोलि उनका फिल्मको चर्चा भन्दा बढी व्यक्तिगत जीवनको चर्चा हुन थालेको छ । यतिबेला उनी आफ्ना प्रेमी देवांकस राणासँग इन्डोनेसियाको बालीमा रमाइरहेका विकिनी तस्वीर सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएकी हुन् । तस्वीरमा उनका प्रेमी देवांकसले साम्राज्ञीलाई शरीरका विभिन्न भागमा चुम्बन गरेका छन् । एक यी तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी विवादमा परेकी छिन् । तर,..
काठमाडौँ, ५ साउन श्रृङ्खला खतिवडा सन् २०१८ की मिस नेपाल अहिले विदेशमा छिन् । उनी टर्कीको इस्तानबुलमा घुमफिर गरिरहेको तस्वीर उनको इन्स्टाग्रामबाट थाहा हुन्छ । तर, उनी टर्की पुगेसँगै उनको प्रेम चर्चाले नेपालमा भने राम्रै चर्चा पाइरहेको छ । टर्कीमा उनले भ्ल्गर शिसन बाँनियासँग खिचेको एक तस्वीरले नै उनीहरु प्रेममा रहेको चर्चा सुरु भएको हो । हुनत, शिसन र श्रृङ्खलाको प्रेम चर्चा..
यो हप्ता किन भएन भद्रगोल सार्बजनिक ? दर्शकहरुमा छटपटी !
काठमाडौँ, ५ साउन । श्रावण ३ गते अर्थात् शुक्रबार भद्रगोल नआएपछी दर्शकहरुमा छटपटी बढेको छ । पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा धेरै रुचाइएको लोकप्रिय कमेडि सिरियल भद्रगोलको अंक नआएपछी दर्शकहरु निराश भएका छन् । कारण आर्थिक बर्ष समाप्त भएर नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएका कारण सम्झौता नविरकणको प्रकृयाले गर्दा यो हप्ता भद्रगोल नआएको हो । अर्को हप्ताबाट निर्धारित समयमै भद्रगोल दर्शक आउने जानकारी छ । मिडिया हब,..
मुम्बई, ५ साउन । नवजोत सिंह सिद्धु 'द कपिल शर्मा शो' मा फिर्ता हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे छ । सिद्धुले केही दिनअघि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी शोमा फिर्ता हुनसक्ने अनुमान गरिएकाे हाे । राजीनामाको खबर पछि सिद्धूका प्रशंसक उनलाई कपिल शर्मा शोमा देख्न चाहन्छन् जसका कारण अर्चना पुरन सिंह आजकाल डराएकी छिन् । अर्चनाले यसबारे आफैं कपिल शर्मालाई बताएकी छिन् । शनिबार कपिलको कार्यक्रममा कंगना रनौतको..
नायिका केकी अधिकारी र उनको 'फिटनेस', हेर्नुहोस तस्बिरहरु
काठमाडौँ, ४ साउन नायिका केकी अधिकारीले जिम गरिसकेपछि र गर्दैगर्दाका केहि तस्बिरहरु सार्बजनिक गरेकी छिन ! सकारात्मक सोचलाई आफ्नो सुन्दरता र तन्दुरुस्तीको कारण मान्ने केकीले ‘सम्पूर्ण’लाई (‘जुम्बा र योग आलोपालो) आफ्नो फिटनेस रहस्य बताएकी छिन्। नायिका केकी अधिकारि सन् २०१० बाट फिल्म स्वर बाट डेब्यु गरेकी थिइन ! उनले अहिलेसम्म धेरै स्मरणीय फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन ! सन् २०१० मा फिल्म ‘स्वर’ बाट..
भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको घरमा आगाे लाग्याे
मुम्बई, ३ साउन । भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको मुम्बईस्थित अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको छ । बिहीबार भएको आगजनीबाट कुनै मानविय क्षति भने भएको छैन । उनको अपार्टमेन्ट खाली भएको कारणले कुनै पनि क्षति नभएको हो । उक्त ओशिवारा अपार्टमेन्टको चौथो तलामा कपिल शर्मा बस्ने गर्दथे । मिडिया रिपोर्ट अनुसार आगो भान्साबाट सुरु भएको थियो । स्थानीयले आगलागी भएलगत्तै दमकललाई सूचना दिएपछि घटना भएको..
समुन्द्री तटमा साम्राज्ञीको 'बोल्ड' अवतार (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २ साउन नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा 'भाईरल' नै भईरहेको छ । उनले समुन्द्र तटको विकिनी फोटो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छिन्। बिहिबार सार्वजनिक भएको विकिनी अवतारमा उनी निकै बोल्ड देखिएकी छिन्। अहिले उनले इन्डोनेशियाको बालीमा रमाउँदै गरेका तस्बिर आफ्नो इन्स्टाग्राममार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन्। हेर्नुहोस् फोटो : ..
के गर्दैछिन् अभिनेत्री करिना ? एक दिनमै तीन करोड पाइन्
काठमाडौँ, २ साउन । भारतको डान्स रियालिटी सो ‘डान्स इन्डिया डान्स’को एक एपिसोडका लागि करिनाले तीन करोड रुपैयाँ लिएकी छन् । उक्त रियालिटी सोको प्रिमियर १२ जुनमा गरिएको थियो । करिनाले दिनको तीन करोड लिएको हल्ला त्यही बेला बाहिर आएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । अभिनेत्रीहरूमा करिनाका लागि भारतीय टेलिभिजनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पारि श्रमिक भुक्तानी गरेको छ । करिनाका अनुसार पुरुष निर्णायकसरह..
गायिका इशा कार्की र पवित्रा गुरुङको तीज गीत 'यो तीजमा गरौ रमाइलो' सार्वजनिक
काठमाडाैं, १ साउन। गायिका इशा कार्की र पवित्रा गुरुङको नयाँ तीज गीतकाे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएकाे छ । इशा कार्कीकै शव्द तथा संगीत रहेकाे 'याे तीजमा गराैं रमाइलाे' गीतकाे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएकाे हाे। छम-छम नचाउने गीत 'यो तीजमा गरौ रमाइलो'को म्युजिक भिडियाेमा सृष्टि खड्का र संगम शर्मा आदिले कम्मर भाचेका छन् । राताे सारी चुरा र हरीयाे पाेतेमा सजिएकी सृष्टि खड्काे..
४२ वर्षकाे उमेरमा बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन पुजा
मुम्बई, १ साउन । बलिउड कलाकार पूजा बन्ना ४२ वर्षकाे उमेरमा बेहुली बनेकी छिन् । पूजा बन्ना र नवाब शाह विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । उनीहरुका बिहेका तस्वीरहरु यतिबेला भाइरल भइरहेका छन् । खासमा ३ तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा खुबै शेयर भइरहेका छन् । एक तस्वीरमा नवाज र पूजा सिल्भर लूकमा दखिएका छन् । बाँकी दुई तस्वीर बिहेका हुन् । पूजाका तस्वीरमा फ्यानले बधाई दर्शाएका..
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाली चलचित्रको बजार निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री तथा उनकी श्रीमती शिल्पा पोखरेलकाे सम्बन्धमा पूर्णविराम लाग्ने संकेत देखिएकाे छ । सामान्य भनाभनपछि सुरु भएको उनीहरूको झगडा अहिले निकै चर्किएकाे छ । शिल्पा छविको घर फर्किने सम्भावना छैन भने छविको मनमासमेत आशा मर्दै गएको छ । लगभग २५ दिनअघि घर छोडेकी शिल्पालाई वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा उनका श्रीमान् छविराजले ‘हृयाप्पी थर्ड एनिभर्सरी’..
छविराज ओझाले लेखे शिल्पा पाेखरेललाई यस्ताे भावुक स्टाटस, भन्छन्- अब गान्धीवाद अपनाएर बस्छु
काठमाडाैं, ३१ असार । चलचित्र निर्माता एवं निर्देशक छविराज ओझाले श्रीमती एवं नायिका शिल्पा पोखरेललाई सबै कुरा भुलेर घर फर्कन आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफ्नाे बुढेसकालकाे सहारा बनिदिन आग्रह गरेका हुन् । शिल्पाले घर फर्केर आए उनले आफ्ना सम्पूर्ण गल्तीहरूलाई सुधारेर गान्धीवाद अपनाएर बस्ने बताए ।उनले लेखेका छन्, ‘यदि तपाईं मेरो बूढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने म पनि गान्धीवादी बनेर बस्न..
गुरु अलौकिक अनमोल छौ तिमी ! आदरणीय अनि सम्मानिय छौ तिमी ! सक्दिन म बयान गर्न तिम्रो ! सक्दिन म बखान गर्न तिम्रो ! तर पनि यति भन्छु तिमी मेरो भगवान हौ , परमज्ञान हौ , सदाचार हौ , संसार हौ ! तिम्रै कृपाले आज संसार चिने ! तिम्रै कृपाले सबथोक किने ! हुदैन थियो केही पनि मेरो ! हुदैन थियो संसार मेरो ! जो छ मेरो सवथोक तिम्रो ज्ञान , बिवेक सतमार्ग तिम्रो !! कोटि..
शिल्पा पोखरेलको आफु दोश्रो श्रीमान रहेको छवी ओझाको खुलाशा ! (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, ३० असार नायिका शिल्पा पोखरेल र उनका श्रीमान छविराज ओझाबीच खटपट सुरु भएको खबरसँगै कलिउड बजार तातेको छ । नायिका शिल्पा आफ्ना श्रीमान् तथा निर्माता छविराज ओझाविरुद्ध घरेलु हिंसा गरेको भन्दै शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने बेहोराको उजुरी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिईन् । शिल्पाले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको थियो । तर केहि समय बित्न नपाउदै छविराज ओझाले शिल्पा पोख्रेलको आफु..
जब रेसलर जोन सिनाले शिल्पा सेट्टीको फोटो पोष्ट गरे
काठमाडौँ, ३१ असार रेसलर जोन सिना सोसल मिडियामा अनौठा सामग्री पस्किनका लागि चर्चित छन् । उनले विभिन्न समयमा शाहरुख खानदेखि विराट कोहलीसम्मका भनाई कुनै सन्दर्भ बिना नै सेयर गरेका छन् । यसपटक पनि उनले भारतीय नायिका शिल्पा शेट्टीको तस्बिर पोष्ट गरेका छन्, तर यसमार्फत् उनले के भन्न खोजेका हुन्, त्यो कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पोष्टमा जोन सिनाले शिल्पा शेट्टीको अनुहार स्टोन..
अब भिलेनकाे अवतारमा आउँदै भुवन केसी, भन्छन्– अबको फिल्ममा अनमोल हिरो
काठमाडाैं, ३० असार । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सदाबहार नायक भूवन केसीले अब आफु खलनायककाे अवतारमा आउने बताएका छन् । नायक केसीले आफ्नै होम प्रोडक्शनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा आफू भिलेनको अवतारमा देखिन लागेको खुलाएका हुन् । आइतबार बेलुकी काठमाण्डौमा आयोजना भएको चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’को इन्डक्ल्याप कार्यक्रममा आफ्नो फेरिदो गेटअपको बिषयमा बोल्दै भूवनले भने–‘अहिले हामी हाम्रो होम प्रोडक्शनको नयाँ चलचित्रको तयारी गरिरहेका छौ । जहाँ, नायक..
गायिका ज्योति मगर पहिलाे पटक सारीमा
काठमाडौं, ३० असार । तीजकाे गीतका लागि ज्याति मगर पहिलाे पटक सारीमा देखिएकी छिन् । उनी विभिन्न छाेटा पहिरनका कारण चर्चामा आइरहन्छिन । तर, यस पटककाे तिजकाे गीतमा उनी सारीमा सजिएकी छिन् । गायिका ज्योति मगर र गायक टंक प्रसाद जोशीको स्वर रहेको तीज गीत ‘कम्मरै भाँचेर’ सार्वजनिक भएको छ । गायक जोशीकै लय र शब्दमा रहेको गीतको म्यूजिक भिडियोमा बिक्रम चौहान, अनिश लामा,..
राम्रो याक्टर्स बन्न चाहन्छु
काठमाडौँ, २९ असार । बुटवलमा जन्मेकी नम्रता अर्याल कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछिन् । स्नातकोत्तर अध्ययनरत अर्याल पढाइका साथै नाटक र टेलिसिरियलबाट आफ्नो करिअर बनाउँदैछिन् । भविश्यमा राम्रो नायिका बन्ने लक्ष्य राखेकी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी । कसरी आउनुभयो कलाकारिता क्षेत्रमा ? ब्याचलर सकिएपछि कलाकारिता क्षेत्रमा आएँ । सुरुमा अल्टीमेट मोडल नेपालको प्रतिष्पर्धाबाट भाग लिएँ । त्यसमा म टप फाइभसम्म पुगेर बेस्ट पर्शनालिटी अवार्ड हात..
काठमाडौँ, २९ असार । नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६औँ जन्मजयन्ती आइतबार देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवाद सहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुन लगाउनुभएको थियो । उहाँले लेख्नुभएको रामायण अहिले पनि नेपालीको घरघरमा सस्वर लय हालेर पाठ गरिन्छ । श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले..
भानुजयन्तीको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा
दमौली, २९ असार । तनहुँको भानु नगरपालिकाले भानुजयन्तीका अवसरमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली भाषाका धरोहर भानुभक्त आचार्यको सम्मानस्वरुप नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । नगरकार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिकास्थित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भानु नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुनिल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । भानुभक्तको..
मुस्लिम खानदानी यी '५ अभिनेत्री' जो नाम परिवर्तन गरेर बलिउडमा चम्किए
एजेन्सी, २८ असार बलिउड फिल्ममा हिरोले मात्र नभई हिरोइनले पनि दर्शकको मन जित्न सफल हुन्छन् । जसमा प्रियंका चोपडा, कंगना रनौत होस वा आलिया भट्ट। यी अभिनेत्रीहरुको भूमिकाले दर्शकको मन जित्न सफल भएका हुन् । तर केहि अभिनेत्रीले पहिचान बनाउनको लागि आफ्नो नामसम्म बदले । आज हामी बताउछौ बलिउडको मुस्लिम अभिनेत्रीको बारेमा जसले नाम बद्लिएर पहिचान बनाए। मधुबाला पचास र साठीको दशकमा आफ्नो अभिनयले..
लाईफको मार्मिक गीतमा तृप्ति र हरिको दमदार अभिनय (भिडिओ हेर्नुहोस)
काठमाडौँ, २८ असार । गायक लाईफ श्रेष्ठले मार्मिक गीत जान्छु है विदेशमा ल्याएका छन् । गीतमा तृप्ति श्रेष्ठ र हरि श्रेष्ठको दमदार अभिनय देख्न सकिन्छ । क्यामरामा राहुल राई छन भने सम्पादनको काम लोकेन्द्र सुब्बाले गरेका छन् । भिडिओ हेर्नुहोस ..
Results 906: You are at page 10 of 31